Thursday January 14, 2021 - 14:28:03 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xildhibaannada golaha koongareeska Mareykanka ee ubadan xisbiga dimuquraadiga ayaa cod aqlabiyad leh ku meel mariyay mooshin ogolaanaya in Trump lamaxkamadeeyo oo lacasilo ka hor inta uusan waqtigiisu idlaan.
Fadhi ay magaalada Washington ku yeesheen ayay 222 xildhibaan oo xisbiga dimuquraadiga katirsan iyo 10 xildhibaan oo jamhuuriyiin ah ku ogolaadeen in madaxweynaha waqtigiisu sii dhamaanayo lamaxkamadeeyo islamarkaana wax laga bedelo qodobka 25aad ee dastuurka Mareykanka.
illaa 197 xildhibaan oo katirsan xisbiga jamhuuriga ayaa diiday in madaxweynahooda lacasilo iyagoo si aad ah udifaacay tasarufaadkii dhanka siyaasadda ahaa ee uu ku dhaqaaqay afartii sano ee uu xilka madaxweynanimo hayay.
Dacwadahan ay qaadeen xildhibaanada american-ka ah waxay timid isbuuc kadib markii ay dhaceen rabshadihii dhiiggu ku daatay ee taageerayaasha Trump ay ku galeen xarunta golaha Koongareeska magaalada Washington arrinkaas oo dhaliyay xiisado siyaasadeed iyo cadaadis dhan walba ah oo usoo galay donald J.
Nancy Pelozi oo ah haweenayda hoggaamisa golaha Koongareeska ayaa hadal kooban oo ay ka jeedisay fadhigii aan caadiga aheyn waxay ku sheegtay in xildhibaanada labada aqal ay si isku raaceen in lamaxkamadeeyo madaxweynaha Mareykanka.
Qaraarka ay gaareen golaha koongareeska ayaa loo gudbin doonaa golaha senate-ka balse maxkamadeyntu ma bilaaban doonto illaa laga caleema saarayo Joe Biden.
Waxaa la sheegayaa in kulanka Trump lagu maxkamadeynayo uu dhici doono wixii ka dambeeya 20-ka bishaan taas oo ka dhigan in aysan suurtagal aheyn in lacasilo madaxweynaha waqtigu ka dhaamaday balse xubnaha xisbiga dimuquraadiga ayaa xeerinaya in maxkamadeyntu ay dhacdo si Trump looga mamnuuco in markale iskusoo taago doorashooyinka madaxtinimada ee dhici doona sanadda 2024-ka.
dhinaca kale kumanaan kun oo ruux american ah ayaa shalay udhintay cudurka carona Virus, ilaha caafimaadka ayaa xaqiijiyay in shalay ay aheyd maalin kale oo kumanaan kun ruux ay galbadeen.
Jaamacadda Johns Hopkins ayaa tirakoob ay soo saartay ku sheegtay in shalay ay carona udhinteen dad gaaraya 4327 ruux halka uu soo ritay boqolaal kun oo ruux.
waa maalintii labaad xiriir ah oo dhimashadu ay ka sare marayso 4300 , tirada guud ee dadka uu carona ku dilay mareykanka ayaa ka sare martay 385 kun oo ruux sida ku cad tirakoobyadii ugu dambeeyay ee lasiimayay